Semalt - Ahoana ny fandroahana adiresy IPv6 avy amin'ny data ofisialin'ny Google Analytics
Fantatsika fa ny Internet dia manana tranokala an-tapitrisany an-tapitrisa ary ny isany dia tsy azo atao ho an'ny iray amintsika. Rehefa mampifandray ny ordinatera, ny solosaina finday na ny fitaovana finday amin'ny aterineto isika, dia mety hampiseho adiresy manokana manokana ny fitaovana ampiasaintsika mba handraisantsika anjara amin'ny kaonty na hivezivezy ao amin'ny tranokala.
Manana adiresy IP maro ny tontolo iainantsika. Amin'izao fotoana izao dia misy IP trill, ary tsy misy fomba hanatsarana sy hanatsarana ny kalitaony - software fuer unternehmen. Ny fomba iray, antsoina hoe IPv6, dia afaka manome fahafahana ny lehilahy, ny vehivavy ary ny ankizy mba hiditra amin'ny aterineto amin'ny alàlan'ny adiresy IP manokana.
Oliver King, mpitantana ny Success Successor an'ny Semalt , dia mamaritra eto izay ilainao handroso amin'ny fahombiazana.
Ahoana ny fomba fiasa sy ny fiaviany?
Efa niezaka ve ianao hahafantatra ny fomba fiasan'io dingana io sy ny tantarany? Raha mbola tsy naheno na inona na inona momba ny Internet Nomena nomena fahefana (IANA) ianao, avelao aho hilaza aminao fa adiresy manokana na habaka atokana ho an'ny finday rehetra, tablette ary fitaovana finday eto amin'izao tontolo izao. Io rafitra io dia miasa amin'ny rejisitry ny aterineto isan-karazany, izay antsoina hoe Rir. Izy no mizara mari-pahaizana manokana amin'ny IP samy hafa ary manaiky azy ireo amin'ireo codes ireo any aoriana. Ny mpanome tolotra aterineto na ny orinasa atolotray anao dia afaka manome ny codeo manokana hiditra amin'ny aterineto amin'ny alalan'ny WiFi na rafitra hafa mitovy amin'izany. Mora ny miditra sy mampiasa ny ati-drakitra nomena alalana mampiasa anaran'olona, ​​tarehimarika, ary tarehin-tsoratra..Ireo karazana ireo dia fantatra amin'ny anarana ICANN ary afaka miavaka amin'ny tsirairay.
Fipoirana ny adiresy IPv4 na IPv6 avy amin'ny rakitra momba anao ao amin'ny Google Analytics
Tianao hofafana ve ny adiresy IPv6 amin'ny data Google Analytics? Afaka manampy anao hanatontosa izany asa izany amin'ny fomba tsara kokoa izany. Misy ny fahafaha-nomena nomena fehezan-teny na nomerao manokana. Azonao ampiasaina ity kaody na nomerao ity mba hahazoana ny adiresy IPv4 mahazatra. Noho izany, tokony miditra ao amin'ny kaonty Google Analytics ianao ary mahazo miditra amin'ny sehatra fitantanana mba hanitsiana ny fanovana. Ampiasao ny dikan-teny farany amin'ny Google Analytics mba hahazoana ny vokatra tianao. Amin'ity sehatra ity, tokony hifidy ny tranonkala web na ny profilinao izay tianao hampiharina ihany koa ny sivana. Raha vantany vao voafidy izy ireo, ny dingana manaraka dia ny manindry ny safidy voafaritra efa voafaritra ary manova ireo menus manidina mba hahazoana vaovao farany sy vaovao farany momba ity dingana manontolo ity. Ny sivana ao amin'ny kaonty Google Analytics dia afaka maka ny roa na telo andro raha te-hiditra tanteraka, ka tokony ho vonona ny hanome azy ireo fotoana marobe alohan'ny hampiasanao azy manontolo.
Adiresy IP tradisionana vs. adiresy IPv6
Ny adiresy IP mahazatra dia mitovy amin'ny 192.368.255.255, ary voatendry amin'ny ordinatera na solosaina finday rehetra na amin'ny findainy. Manana isa amin'ny laharana 255 izy io ary voatendry amin'ny isa tsy voafetra. Ny IPv6 IP dia mitovy amin'ny 4.294.367.296 na mitovy 2001: d18: 0: 1234: 0: 567: 8: 1. Samy manana ny toetrany, ny safidy, ny tombony, ary ny tsy fahampiana azy ireo izy roa